Hanohy fihibohana sa tsia? | Hevitra MPANOHARIANA |
2020-04-03 @ 22:28 in Ankapobeny
Miandry ny andro ivalian'izany fanontaniana izany avokoa ny maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Toa lazaina ho saro-baliana ilay fanontaniana, saingy mora io rehefa mijery izay laharam-pahamehana sy heverina ho manan-danja kokoa ny olona manapa-kevitra ny amin'izany. Inona ary ny fanontaniana ambony indrindra iankinan'ny fanapahan-kevitra hanohizana na hampitsaharana ny fihibohana? Mety ho samy manana isika fa raha ny amiko manokana dia hoe iza no ambony ny aina sa ny toekarena? Ny aim-bahoaka sa ny hanim-bahoaka? [maty rahampitso sa maty raha afaka ampitso?]
Raha ny tokony ho izy dia tokana ny safidy amin'izany: na manao ahoana na manao ahoana dia tsy misy ambony noho ny aina. Ka ahoana no atao hitandroana ilay aina? Ary ahoana ihany koa ny mety ho fiantraikan'izay fanapahan-kevitra horaisina avy eo? Inona izany ny fepetra tokony horaisina miaraka amin'izay fanapahan-kevitra tapaka? Ireo no tokony hovaliana na mety ho tsy valiako eto am-panoratana aza.
Fahadisoana voalohany nataon'ny mpitondra tamin'ity raharaha Covid-19 ity ny nametrahany ny toekarena ambonin'ny aina raha niangaviana hoe hidio ny sisitany amin'ny fanakatonana ny sidina avy sy mankany Eoropa (sy ivelany iray manontolo). Niezaka ny nanarina izy avy eo tamin'ny fanakatonana ny tanàna na ny faritra tamin'ny hafa... Dia azo atao ve ny mihevitra fa hiverina mankany amin'ny fahadisoana indray ny mpitondra rehefa nahazo lesona tamin'izay nitranga teo aloha sy raha mijery ny zavamisy manerantany?
Inona moa no azo heverina hitranga avy hatrany raha lazaina hoe tapitra hatreo ny "confinement"? Efa nisy ny nanao teny tsipalotra hoe efa nandresy isika izany, efa voafehy izany ilay izy ka dia andao hiara-mirona hivoaka ny arabe, hihorakoraka sy hifampiarahaba, ary tsy hihaino intsony izay fepetra tokony mbola ho arahana. Izany hoe eo amin'ny fotoana tokony hitandreman'ny besinimaro indrindra no hovahana tampoka ny varavarana... fa dia fahafatesana mikararana no hitranga eto Madagasikara.
Inona indray no azo heverina hitranga raha lazaina hoe mbola mitohy ny fihibohana? Hanohy amin'ny fivoahana ihany izay efa mivoaka, fa mbola hitandrina kosa ny besinimaro izay tsy hitantsika sy tsy henontsika na dia ho olana ho azy ireo aza ny sakafo hohanina. Mety hisy ny fanoherana ilay fanapahan-kevitra ary tsy fantatra izay ho fiantraikan'izany... ary eto no tena ilaina ireo olona efa notakiako hifampiresahan'ny Filoham-pirenena saingy tsy noraharahiany mihitsy mandraka androany. Tsy maninona fa izy no tompon'ny fanapahan-kevitra farany amin'iny.
Koa na dia amin'ireo nosoratako ireo fotsiny aza dia aiza ho aiza no mety kokoa sy mahasoa kokoa ny vahoaka malagasy? Tsy ijerena resa-pianakaviana izany fa fanapahan-kevitra politika rehefa ny filoha no naka ny toerana hitarika amin'ny ady amin'ny coronavirus ity! Fa raha mbola tsy mety ho azonao ihany izay tian'ny mpanoratra holazaina dia hoy aho hoe "Aza misioka raha tsy tafavoaka ny ala" ary mbola vao eto ampanombohan'ny fiitarana isika izao ka aleo tohizana izay efa natomboka fa ny fepetra entina hanampiana ny olona no jereo, na ny marina kokoa dia hoe ireo olona azo atokisana hizara tsy miangatra no tadiavo. Tsy adala akory ireo lazaina ho mpanohitra raha efa mahasahy miteny sahady hoe tokony ho amin'ny faran'ny volana avrily no haingana indrindra vao vahàna ny tady mamatotra ny varavarambe tsy hisokatra. Koa ambava homana, am-po mieritra fa efa lava dia lava sahady ny lahatsoratra!